Sigaar cabista iyo Tubaakada Caawinta Bulshada LGBTQ ee Vermont
Bogga ugu weyn » Vermonters » Waxaan rabaa inaan joojiyo » LGBTQ
CAAWIMO BILAASH AH OO TAAGEERA LGBTQ
Waad xoog badan tahay inaad joojiso tubaakada. Bulshada LGBTQ waxay sigaar ku cabiraan qiima ka sareeya kan toosan / toosan, laakiin shakhsiyaadka LGBTQ waxay ka adkaadaan dhibaatada maalin kasta. Waad ka adkaan kartaa qabatinka tubaakada, sidoo kale. Waxaan haynaa ilo, qalab iyo barnaamijyo habaysan oo kaa caawinaya inaad joojiso sigaar cabidda iyo waxyaabaha kale ee tubaakada laga sameeyo.
Ka hel adeeg bixiye daryeel caafimaad oo saaxiibtinimo LGBTQ iyada oo loo marayo Mashruuca Caafimaadka Kaladuwanaanta ee Vermont . Dhaqanka xubinta waxaa ka go'an inuu ahaado mid aamin ah, xaqiijinaya, kaalmo iyo waxtar u leh kuwa ka tirsan bulshada LGBTQ.
Ka hel caawimaad joojinta 802Quits. Baro wax badan oo ku saabsan caawimaad joojinta gaarka ah, oo ay ku jiraan bilaash nikotiin, xanjo iyo lozenges.
Diyaar u noqo inaad ku joojiso talaabooyin fudud, sida diyaarinta gurigaaga, goobtaada shaqada iyo gaarigaaga. Baro sida loo diyaariyo.
Booqo Shabakada Kansarka La Xiriira Tubaakada ee LGBTQ .
Kala hadal daryeel caafimaad bixiyahaaga waxa ku saabsan daawooyinka oo jooji caawimaadda adiga kuu fiican.
Haddii aad rabto inaad bilowdo:
Call 1-800-QUIT-HADA caawimaad joojinta ku habboon oo bilaash ah oo loogu talagalay tababarka hal-hal-hal;
Jooji khadka tooska ah adeegsiga aaladaha iyo ilaha sida looxyada fariimaha, joojiya qorshaynta iyo joojinta raadraaca horumarka.